ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် Lotus ၏အတော်များများကပုံဆောငျဆိုလို
အဆိုပါကြာဗုဒ္ဓ၏အချိန်မတိုင်မီကတည်းကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏သင်္ကေတခဲ့, ထိုသို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနုပညာနှင့်စာပေအတွက် profusely blooms ။ ၎င်း၏အမြစ်များရွှံ့ရေ၌ရှိကြ၏, သို့သော်ကြာပွင့်ကိုသန့်ရှင်းမွှေး, ပွင်ဖို့ရွှံ့အထက်မြင့်တက်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအနုပညာများတွင်အပြည့်အဝ Bloom ကြာပန်းပွင့်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ သစ္စာဉာဏ်အလင်း ဟာတံခါးပိတ်ဖူးအငုံထွက်သစ္စာဉာဏ်အလင်းမရောက်မီအချိန်ကိုကိုယ်စားပြုစဉ်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပွင့်ကိုသစ္စာဉာဏ်အလင်းသာမန်မျက်မှောက်ကျော်လွန်ကြောင်းညွှန်ပြ၎င်း၏စင်တာက hidden အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်းသည်။
အမြစ်အာဟာရအဆိုပါရွှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးလူ့အသက်တွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့အခမဲ့နှင့်ပွင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှာသောကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆငျးရဲဒုက်ခအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရွှံ့အထက်အပွင့်မြင့်တက်နေစဉ်အမြစ်များနှင့်ပင်စည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနထေိုငျရှိရာရွှံ့ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက ဇင် ကျမ်းပိုဒ် "ကျွန်တော်တစ်ဦးကြာပန်းကဲ့သို့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူရွှံ့ရေ၌မတည်ရှိနိုင်ပါစေ။ " ဟုဆို
ပွင်ဖို့ရွှံ့အထက်မြင့်တက်လာကြီးအလိုအပျသ ညျယုံကွညျခွငျး အလေ့အထ၌၎င်း, ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း, မိမိကိုယ်ကို၌တည်၏။ ဒါကြောင့်, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကြာပန်းသည်လည်းယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ယင်းအတွက် Lotus ပါဠိကို Canon
အဆိုပါ သမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓ ကသူ၏ဟောပြောချက်ထဲမှာကြာပန်းအမှတ်လက္ခဏာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာ, Dona သုတ္တန် (မှာရှိတဲ့ ပါဠိ Tipitika သူတစ်ဦးဘုရားခဲ့မိလျှင်, Anguttara Nikaya 4.36), ဗုဒ္ဓဟုမေးခဲ့သည်။ သူကပြန်ဖြေတယ်,
"ကိုယ့်တစ်ဦး, အနီအပြာ, ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်ကြာပန်းနဲ့တူ - ကိုရေ၌မွေးဖွားရေ၌စိုက်ပျိုး, ရေအထက်တွင်ထ - စိုက်ပျိုး, ကမ္ဘာပေါ်မှာမွေးဖွား - ငါတူညီသောလမ်းအတွက်ရေအားဖြင့် unsmeared တစ်ခွင်, လောကကိုအောင်ပြီပြီးလျှင်ကမ္ဘာကြီး - လောကက unsmeared အသက်ရှင်သည်အတိုင်း, ဗြဟ္မာငါ့ကိုသတိရပါ။ '' နိုး။ ' "[Thanissaro ရဟန်းဘာသာပြန်ချက်]
အဆိုပါ Tipitika ၏အခြားကဏ္ဍထဲမှာ, Theragatha ( "အသက်ကြီးသံဃာကျမ်းပိုဒ်"), ထိုတပည့် Udayin မှစွပ်စွဲနေတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်းမရှိ -
သူကလောကကယစ်မူးရပါဘူး။ [အင်ဒရူး Olendzki ဘာသာပြန်ချက်]
တစ်ဦးသင်္ကေတအဖြစ် Lotus ၏အခြားအသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါကြာပန်းပွင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရှစ်မင်္ဂလာသင်္ကေတ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ၏။
ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ ဗုဒ္ဓမွေးခင် ကသူ့မိခင်ဘုရင်မကြီးမာယာ၎င်း၏ပင်စည်ထဲမှာအဖြူရောင်ကြာပန်းတင်ဆောင်လာသောအဖြူရောင်နွားကိုဆင်၏စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် များနှင့် bodhisattvas မကြာခဏထိုင်ပုံဖော်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြာပန်းအောက်ခံပေါ်မှာရပ်နေနေကြသည်။ Amitabha ဗုဒ္ဓ နီးပါးအမြဲထိုင်လျက်သို့မဟုတ်တစ်ကြာပန်းပေါ်မတ်တပ်ရပ်, သူသည်မကြာခဏအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့ကြာပန်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Lotus န္တာန်တိ အရှိဆုံးအလွန်အမင်းလေးစားစွာမဟာယာနန္တာန်တိတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလူသိများတဲ့ဂါထာ Om မဏိ Padme Hum အကြမ်းဖျင်းစ "ဟုအဆိုပါကြာပန်း၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ရတနာ။ "
ဂျပန်မှစွပ်စွဲနေတဲ့ဂန္စာသားကိုအဆိုအရ Soto ဇင် မာစတာ Keizan Jokin (1268-1325), အလငျး (Denkoroku) ၏ဂီယာ, ဗုဒ္ဓတစ်ချိန်ကသူတစ်ဦးကိုရွှေကြာတက်ကျင်းပသည့်အတွက်အသံတိတ်တရားဒေသနာကိုပေး၏။ တပည့် Mahakasyapa ပြုံးပြသည်။ ဗုဒ္ဓဟူမူကား, သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏ Mahakasyapa ရဲ့သဘောပေါက်လက်ခံအတည်ပြု "ငါ Nirvana ၏ ineffable စိတ်ကိုအမှန်တရားရဲ့မျက်စိများ၏ဘဏ္ဍာတိုက်ရှိသည်။ ဤအကျွန်ုပ်သည်ကဿပမှအပ်နှံ။ "
ဗုဒ္ဓဘာသာ iconography ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကြာပန်း၏အရောင်အထူးသအဓိပ်ပာယျဆောငျ။
တစ်ဦးကအပြာကြာပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြု သည်ပညာ၏စုံလင်ခြင်း ။ ဒါဟာ bodhisattva နှင့်ဆက်စပ်နေသည် Manjusri ။ အချို့ကျောင်းများမှာအပြာရောင်ကြာပန်းပွညျ့အဝပွင့်အတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏စင်တာကိုတှေ့မွငျရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Dogen ၏ Kuge (အာကာသ၏ပန်းပွင့်) fascicle အတွက်အပြာရောင် lotuses ၏ရေးသားခဲ့သည် Shobogenzo ။
"ဒီမီးစများ၌၎င်းနှင့်မီးတောက်များအပြာရောင်ကြာပန်းပွင့်လင်းရာအရပ်နှင့်အချိန်ဖြစ်ကြပြီး blooming ဥပမာ, ဖွင့်ပွဲနှင့်အပြာကြာ၏ blooming ၏အချိန်နှင့်နေရာမီးအလယ်၌မီးလျှံ၏အချိန်မှာရှိပါတယ်။ ။ အားလုံးမီးစများ၌၎င်းနှင့် မီးတောက်အပြာရောင်ကြာပန်းပွင့်လင်းရာအရပ်နှင့်အချိန်ရာအရပ်နှင့်အချိန်အတွင်းဖြစ်ကြပြီး blooming ။ တစ်ခုတည်းမီးပွားအတွက် blooming, အတိတ်ကာလ blooming, မြေကြီးပေါ်မှာ blooming, မိုဃ်းကောင်းကင်၌ blooming, အပြာ lotuses ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာဖြစ်ကြောင်းသိပါ ပစ္စုပ္ပန်၌တည်၏။ ဤသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအမှန်တကယ်အချိန်နှင့်နေရာတှေ့ကွုံနအပြာရောင်ကြာပန်း၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။ အပြာရောင်ကြာပန်းပွင့်ကို၏ဤအချိန်နှင့်နေရာအားဖြင့်ရှေ့မြောမနေပါနဲ့။ " [Yasuda Joshu Roshi နှင့် Anzan Hoshin sensei ဘာသာပြန်ချက်]
တစ်ဦးကပန်းရောင်ကြာဗုဒ္ဓနှင့်သမိုင်းနှင့်ဆက်ခံကိုယ်စားပြု ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ။
ခုနှစ်တွင် esoteric ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးခရမ်းရောင်ကြာရှားပါးခြင်းနှင့်ဆန်းကြယ်မှုများသည်နှင့်အတူတကွပြွတ်ပန်းပွင့်တွေရဲ့အရေအတွက်ပေါ် မူတည်. များစွာသောအမှုအရာဖျောပွနိုငျသညျ။
တစ်ဦးကအနီကြာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် Avalokiteshvara ၏ bodhisattva သနားစုံမက် ။ ဒါဟာအစစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်း, စင်ကြယ်သောသဘာဝနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အဖြူရောင်ကြာပန်းအပေါင်းတို့၏စင်ကြယ်အောင် ပြု. စိတ်ပြည်နယ်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ အဆိပ် ။
အဆိုပါ Jataka ပုံပြင်များ
Qi (Chi): ဘဝကတပ်ဖွဲ့များ၏ Taoist နိယာမ
ထိပ်တန်း6စကိတ်ဂိမ်းများ
အရှေ့ Stroudsburg တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
ပုဂံနှင့် Wiccan ပွဲတော် Etiquette
Wide Receiver Play ဖို့အများစုမှာထိရောက်သောနည်းလမ်း Learn